10 Qalabka Maareynta Mashruuca Bilaashka ah ee Bilowga sanadka 2022
Bogga ugu weyn 10 Qalabka Maareynta Mashruuca Bilaashka ah ee Bilowga sanadka 2022
Fulinta mashruuc wanaagsan oo ah maamulaha mashruuca ma fududa. Tani waa sababta oo ah adiga ayaa mas'uul ka noqon doona inaad si guul leh u hagto mashruuc laga bilaabo rimidda ilaa dhammaystirka.
Sida ay tahay, ma gaari kartid tan adiga oo aan u isticmaalin aaladaha maareynta mashruuca. Sidaa darteed, maqaalkan, waxaad ku baran doontaa aaladaha ugu wanaagsan ee maareynta mashruuca bilaashka ah.
Habka maareynta mashruuca waxaa ka mid ah qorsheynta, bilowga, fulinta, la socodka, iyo xiritaanka. Kahor intaadan bilaabin mashruuc kasta, waxaad u baahan doontaa qorshe qeexaya sida wax u bilaaban doonaan, sida loo dhisi doono, iyo sida ay ku dhammaan doonaan.
Mashruuc kasta caadi ahaan wuxuu leeyahay laba shay; miisaaniyad iyo wakhti go'an. Maareeyayaasha mashruucu waxay hubiyaan in dhammaan xubnaha kale ee kooxda ay si firfircoon ula shaqeeyaan miisaaniyadda la siiyay oo ay dhammaystiraan hawsha ka hor wakhtiga kama dambaysta ah.
Inaadan aqoon qalabka loo isticmaalo si loo fuliyo mashruuc guuleysta ayaa hubaal kaa dhigi doonta maareeye mashruuc oo xun. Sababtaas awgeed ayaan kuu soo diyaarinay qalabkii ugu wanaagsanaa ee maareynta mashruuca Google ee bilaashka ahaa si aad u isticmaasho.
Aaladaha Bilaashka Maaraynta Mashruuca Google ee ugu Fiican
Hoos waxaa ah aaladaha ugu fiican ee maareynta mashruuca Google ee kaa caawin kara inaad si guul leh u fuliso mashaariicda si dhib la’aan ah:
Waraaqaha Google ee Maareynta Mashruuca
Google Docs ee Maareynta Mashruuca
Google Drive ee Maareynta Mashruuca
Gmail ee Maareynta Mashruuca
Google Slides ee Maareynta Mashruuca
Jadwalka Google ee Maareynta Mashruuca
Google Keep for Management Project
Google Chat ee Maareynta Mashruuca
Waraaqaha Google waa barnaamij xaashiyaha oo ah qayb ka mid ah qaybta xafiiska Google Drive. Qalabkan waxaa loo adeegsan karaa sidii shabakad ama codsi guur -guura, ama xitaa sidii codsi desktop ah.
Waa kuwan adeegsiga softiweerka:
Qorshaynta Mashruuca: Waraaqaha Google waxay wada shaqeeyaan Microsoft Excel. Qalabkani wuxuu ka caawiyaa maamulayaasha mashruuca inay qoraan qorshayaasha iyo hawlaha mashruuca oo faahfaahsan.
Raad -raadinta Wax -soo -saarka: Adigoo wata faylka Google Sheet, waxaad geli kartaa xaddiga waqtiga ay kooxda mashruucaagu ku bixiyaan mashruuc gaar ah. Qalabkani wuxuu kaloo kaa caawin doonaa ururinta macluumaadka si aad u ogaato miisaaniyaddaada marka aad geliso xisaabinta iyo qaaciidooyinka qaarkood aaladda dhexdeeda.
XIDHIIDHKA: 15 Khaladaad Maaliyadeed Ee Ugu Weyn Dadku Sameeyaan
Raadraaca Horumarka iyo Warbixinta: Markaad dejiso faylkaaga Google Sheets adigoo ku quudinaya macluumaad, waxay kaa caawin doontaa inaad si toos ah u sii wadato bartilmaameedka horumarka. Tani waxay ka caawisaa maamulayaasha mashruuca inay ogaadaan sida dhaqsaha leh ee mashruucu u socdo. Xogta laga soo ururiyey, maareeyaha mashruuca ayaa hadda qori kara warbixinnada oo la xiriiri kara daneeyayaasha.
Waraaqaha Google oo wax weyn ka tari doona maareeyayaasha mashruuca waxaa ka mid ah Xaashida Jaartarka Mashruuca, Xaashida Jadwalka Mashruuca, Xaashida Miisaaniyadda Mashruuca, Iyo Xaashida Shaxda Gantt.
Google Docs waa aalad maareyn mashruuc oo muhiim ah oo lacag la’aan ah. Waa softiweer ka shaqaynaya ereyada oo abuuraya qayb ka mid ah qaybta xafiiska Google Drive. Isticmaalayaasha ayaa wax ku qori kara waxna ka beddeli kara aaladdan waxaana laga heli karaa mobilada iyo desktop -ka labadaba.
Google Docs waxay ka caawisaa maamulayaasha mashruuca inay sameeyaan waxa soo socda:
Maamulka Dukumintiga: Dukumiintiyada Google waxay gacan ka geystaan ​​baabi'inta dhibaatooyinka tafatirka dukumiintiga. Xakamaynta nuqulkeeda ayaa mas'uul ka ah tan maadaama ay gacan ka geysaneyso in la muujiyo qofka iyo marka wax laga beddelo dukumintiga.
Wadashaqeynta Kooxda: Iyada oo la adeegsanayo Google Docs, kooxda mashruuca ayaa ka faalloon karta, soo jeedin karta, oo wax ka beddeli karta waqtiga-dhabta ah taas oo ka dhigaysa wada-shaqaynta kooxda inay noqoto mid hufan.
Waxaan diyaarinay liis diyaarsan Google Docs oo kaa caawin kara inaad bilowdo mashaariicdaada. Waxaa ka mid ah Xaashida Qorshaha Mashruuca, Mashruuca mashruuca, Qaab -dhismeedka Kiiska Ganacsiga, Iyo Istaraatiijiyada Yoolalka SMART.
Adigoo adeegsanaya Google Drive, waxaad si badbaado leh ugu kaydin kartaa faylka mashruucaaga. Waxa kale oo aad kaydin kartaa faylasha ku jira faylka si aad ugu fududeyso kooxda mashruucaaga inay ka helaan aalad kasta.
Google Drive wuxuu ka caawiyaa maamulayaasha mashruuca inay si fiican u maareeyaan dukumiintiyada isagoo u suurta gelinaya xubin kasta oo ka mid ah kooxda mashruuca inay helaan dukumintiga.
Dhinaca kale, Google Drive wuxuu hubiyaa isgaarsiinta iyo wada shaqaynta koox ahaan. Halkan, maamulaha mashruuca wuxuu isticmaali karaa Google Drive si uu ula wadaago faylasha daneeyayaasha dibadda ee ka baxsan kooxda mashruuca. Tani waxay gacan ka geysaneysaa in la siiyo jawaab -celin taas oo keenaysa bixinta badeecad tayo leh.
Gmail waxay noqotaa mid ka mid ah adeegyada emaylka ee ugu caansan maadaama in ka badan hal bilyan oo qof ay adeegsadaan adduunka oo dhan. Isticmaalayaasha ayaa ka heli kara software -kan mobilada iyo desktop -ka.
XIDHIIDHKA: Sida Looga Baxo Qandaraaska Taleefanka Gacanta Adigoon Bixin | 7 Tallaabooyin
Qalabkani waa qayb ka mid ah Google Suite. Gmail waxay awood u siisaa koox inay wadaagaan faylasha mashruuca waxayna caawisaa inay dhammaan xubnaha kooxda xiriiriyaan. Iyada oo loo marayo Gmail, maareeyaha mashruuca ayaa la wadaagi kara macluumaadka murugsan daneeyayaasha kala duwan.
Si ka duwan adeegyada kale ee emaylka, Gmail wuxuu siiyaa dadka isticmaala meel wax lagu kaydiyo oo dhan 15 gigabytes waxayna u oggolaan kartaa adeegsadayaasha inay diraan emayl gaaraya 25 megabytes.
Google Slides waa qayb ka mid ah suugaanta Google Drive. Waxay awood u siineysaa koox inay abuuraan bandhigyo ku habboon Microsoft PowerPoint.
Intaa waxaa dheer, qalabkan maareynta mashruuca Google wuxuu ka caawiyaa maamulayaasha mashruuca inay yeeshaan dulmar mashruuc. Tani waxay ka caawineysaa inay ogaadaan tirada ilaha ay adeegsadaan, dhacdooyinka muhiimka ah ee ku lug leh, iyo sida kooxdu u shaqayn doonto.
Maamulayaasha mashruuca ayaa waliba adeegsada Slides -ka Google si ay ula wadaagaan kooxda fikradaha ku saabsan sida mashruuca loo fulin doono.
Qalabkan maareynta mashruuca Google ee bilaashka ah wuxuu ka caawiyaa maareeyayaasha mashruuca suuq -geynta inay horumariyaan oo tafatiraan dhacdooyinka iyo xusuusinta hubiya in mashaariicdu ku socdaan waddada. Waxaad ka geli kartaa Kalandarka Google moobilka ama kombiyuutarka.
Kalandarka Google wuxuu kaloo ka caawiyaa maamulayaasha mashruuca inay u soo diraan casuumaad iyo xusuusinta daneeyayaasha gudaha iyo dibaddaba waxaas oo dhan waa suurtogal sababtoo ah ku biirista Gmail.
Maareeyayaasha mashruuca ayaa adeegsada software -kan si ay u qaataan qoraallo sida qoraalka caadiga ah, liisaska sumadda leh, sawirrada, iyo maqalka. Markaad qaadato qoraalladan, waxaad la wadaagi kartaa kooxdaada.
Xubnaha kooxdaadu waxay ka heli karaan qoraalada qalabkan meelo badan oo kala duwan. Adigoo adeegsanaya aaladdan, waxaad ku dari kartaa midabada liisaska iyo sidoo kale xusuusiyeyaasha si aad u hubiso inaysan waxba ka harin.
XIDHIIDHKA: Fikradaha Daryeelka Nafsiga ee 30 ee aan la Fidin 2022
Google Keep ayaa sidoo kale ka caawin doonta maareeyayaasha mashruuca inay wadaagaan liisaska hawsha kooxdooda dhexdeeda taas oo u suurtogelinaysa xubnaha kooxda inay la falgalaan liiska hubinta.
Qalabkan bilaashka ahi waa mid aad u fudud oo hufan marka la siinayo liis -hubin koox. Si kastaba ha ahaatee, ma aha mid aad u casri ah.
Google Chat ayaa loo sameeyay si loo beddelo Google Talk, Huddle, iyo Hangouts. Software -kaan bilaashka ah waxaa ku jira fariin, wada sheekaysiga fiidiyaha, iyo VOIP.
Google wuxuu damacsan yahay inuu u qaybiyo software -kaan Kulamada Hangouts taasi waxay taageeri doontaa kaliya shirarka fiidiyaha iyo La sheekaysiga sheekaysiga taasi waxay taageeri doontaa kaliya fariimaha deg dega ah.
Qalabkan bilaashka ah wuxuu u sahlayaa xubnaha kooxda inay wada xiriiraan oo iskaashadaan iyagoo adeegsanaya qoraalka ama shirarka fiidiyaha. Waxa kale oo ay gacan ka geysaneysaa in la baabi'iyo dirista joogtada ah iyo helitaanka emaylka ee xubnaha kooxda.
Isticmaalayaasha ayaa ka heli kara softiweerkan aalado kala duwan. Si kastaba ha ahaatee, wali waxaa jira arimo ku saabsan arjiga desktop -ka iyo codsiga wada sheekaysiga. Google wuxuu ka shaqeynayaa sidii loo xalin lahaa dhibaatooyinkan.
Google suite waxay siisaa maareeyayaasha mashruuca suuq-geynta aalado bilaash ah oo fudud kuwaas oo aan kaliya ka caawin inay bilaabaan oo dhammaystiraan mashaariicda laakiin sidoo kale bixiyaan mashaariic tayo sare leh. Si kastaba ha noqotee, aaladaha qaarkood ma aha kuwo aad u casri ah.
Haddii aad rabto inaad bilowdo mashruuc oo aad raadineyso qalab bilaash ah oo fudud oo aad isticmaasho, Google ayaa ku daboolay. Ka hubi aaladaha oo soo dejiso.
15 Trackers Portfolio Portfolio Stock Online oo Bilaash ah 2022
Siyaabaha ugu Wanaagsan ee Lacag Loogu Siin Karo In La Sameeyo Xaashiyaha Excel 2022
Sida Loo Sameeyo Lacag Abuurista Barnaamijyo loogu talagalay Android/ 10 Habraac oo ku lug leh Abuuritaanka Barnaamijyada
Adeegga Iimaylka ee ugu Fiican Ganacsiga Yaryar 15 | Hagaha Khabiirka
10 Qalabka Maareynta Mashruuca Google ee ugu Fiican & Barnaamijyada
Software Maaraynta Mashruuca oo Loo Dhisay Google & G
120-ka shirkadood ee ugu sarreeya Hindiya kuwaas oo hadda adduunka wax ka beddelaya | 2022
Sida Guri Loo Iibiyo | 2022
Soo dejiso Template Warqadda Xaqiijinta Deynta Bilaashka ah & Muunadaha
Qofna ma aha inuu bixiyo deyn uusan lagu lahayn, qofna yuusan ka fogaan...
21 Jariidado Lacag La'aan ah oo Boosta lagu diro oo aan lahayn Ajanda qarsoon | 2022 Liiska
Kanaal kasta oo telefishanku waxa uu leeyahay meel diiradda lagu saaro oo ay ku faafiyaan macluumaadka ku saabsan dhammaan dhacdooyinka. Sidaas uma kala duwana…
70 Inta Ugu Dhiirrigelinta Badan Michelle Obama Oo Ku Saabsan Haweenka iyo Nolosha
Sannadkii 2018, Michelle Obama waxay daabacday xusuus qoto dheer, awood leh, oo dhiirrigelin leh oo soo jiidatay dareen badan. Waa maxay…
Sida Noloshaada Looga Dhigo Mid Xiiso Badan | 17ka Waddo ee Ugu Fiican
Sida ay noloshu u adag tahay, qofna ma rabo inuu ku noolaado nolol caajis ah. Kadib, sida ugu badan ee ay tahay…
50 Xigasho Dhiirigelin Ah Oo Ku Saabsan Nolosha Iyo Halganka 2022 -ka
Oraahda waaweyni waxay ka dhigtaa maskax wanaagsan oo maskaxdu waxay samaysaa hoggaamiyeyaal wanaagsan. Marka loo eego halganka nolosha, a…
15 Websaydh Ugu Fiican Si Aad Ugu Daawato Filimaanta Tiyaatarada Si Bilaash Ah 2022
Halkan waxaa ah war wanaagsan oo loogu talagalay kuwa jecel filimada iyagoo raadinaya mareegaha si ay u daawadaan filimada masraxa ee ugu wanaagsan iyo…